Snapdragon 865 Plus ayaa lagu shaaciyey iyadoo waxqabadyadu soo hagaagayaan | Androidsis
Snapdragon 865 Plus ayaa lagu dhawaaqay iyadoo la hagaajinayo waxqabadka calanka soo socda
Ka soo horjeedda qaddiyadaha qaarkood, processor-ka cusub ee Qualcomm, oo aad loo xamanayo Snapdragon 865 Plus, ayaa ugu dambeyntii la sii daayay soo saaraha semiconductor saacado yar uun ka hor. Meizu wuxuu ka mid ahaa shirkadihii hore u sheegay in SoC-ga uusan imaan doonin sanadkaan, laakiin waxaan horeyba u aragnay hadalkaasi inuu ahaa wax aan ka badneyn mala awaal.
Sidii la filaayay, waxay leedahay waxqabad ka sareeya kii hore loo soo bandhigay Snapdragon 865, taas oo, lafteeda, aad u waafaqsan; ma jiro codsi ama ciyaar uusan ku socon karin dhib la’aan. Xitaa sidaas, Noocan cusub ee 'Plus' waxaan ku heli doonnaa natiijooyin wanaagsan maalinba maalinta ka dambaysa.
1 Dhammaan wixii ku saabsan Snapdragon 865 Plus, waa SoC awood leh oo wax walba iyo in ka badan la socon kara
1.1 Telefoonkee ayaa ah kuwa ugu horeeya ee adeegsada?
Dhammaan wixii ku saabsan Snapdragon 865 Plus, waa SoC awood leh oo wax walba iyo in ka badan la socon kara
Waxay noqoneysaa mid niyad jab leh, ka dib markii ay soo bandhigeen nooca Plus ee loogu talagalay Snapdragon 855, Qualcomm ma uusan sii deyn lahayn qaabka fitamiin ee SDM865. Si la mid ah, waxaan horeyba u hilmaami karnaa maqnaanshihiisa suurtagalka ah ee sanadkan, maadaama aan hadda haysanno, iyo saacad soo noqnoqoneysa, laakiin ilaalinta xajmiga cabbirka ee 7 nm iyo tilmaamaha kale.
Su'aasha, Kani waa Chipset-kii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'octa-core chipset' ee taleefannada casriga ah ee ka gudba xaddiga xawaaraha 3.0 GHz, si loo bixiyo waxqabad gaar ah oo ah 3.1 GHz iyada oo ay ugu wacan tahay xudunta Kryo 585; tani waxay ka dhigan tahay kororka waxqabadka 10%, sida laga soo xigtay Qualcomm. Qeybaha intiisa kale waxaa loo qeybiyaa hoosta qorshaha '3 + 4': 3x oo ah 2.42 GHz + 4x at 1.8 GHz.
Adreno 650 GPU wuxuu kusii nagaanayaa barnaamijkaan mobilka, laakiin sidoo kale waxay leedahay waxqabad ka badan 10%, sidaas darteed processor-kan ayaa bixin doona khibrad ciyaareed oo wanaagsan, wax ballanqaad badan leh. Dhanka kale, modemka 'X55' oo leh 5G isku xirnaantiisa waxaa xafidaya SDM865 +.
SoC-kani wuxuu la jaan qaadayaa tiknoolajiyada Qualcomm FastConnect 6900, oo bixisa xawaare gaaraya ilaa 3.6 GB / s. Waxa kale oo ay taageertaa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, iyo 144 Hz bandhigyo, marka lagu daro True 10-bit HDR technology.
Telefoonkee ayaa ah kuwa ugu horeeya ee adeegsada?
Sida muuqata, mobiillada ugu horreeya ee qalabayn doona Snapdragon 865+ hoosta daboolka waxay noqon doonaan kuwa si weyn loo sugayo ROG Telefoonka 3 ee Asus iyo Lenovo Legion. Dabcan, labadan mashiin waxay yeelan doonaan shaqooyin ciyaaro ah, maadaama ay diirada saari doonaan qeybta ciyaarta. Tani waxay ka dhigan tahay inay yeelan doonaan nidaamyo qaboojin oo horumarsan iyo astaamo dheeri ah oo ka dhigi doona khibradaha ciyaaraha ee iyaga ka sarreeya wixii horay loo yaqaan.
Asus ROG Telefoonka 2
Waxbadan lagama oga labadan shaqsi ee soo socda, laakiin wararka xanta qaarkood ayaa soo ifbaxay oo ku saabsan astaamahooda suurtagalka ah iyo astaamaha farsamo, iyadoo mid ka mid ah soo jeedineyso labaduba waxay wadayaal u noqon doonaan xayndaabyada FullHD + oo leh heer sare oo cusbooneysiin ah 144 Hz, taas oo u dhiganta heerka dib-u-socodsiinta illaa 144 sawir ilbidhiqsi, ama fps (wareegyo ilbidhiqsi ah). Taasna, dheecaanka cayaaraha ayaa lala barbardhigi karaa kan laga helay Casic 5G, Nubia Ciyaar 5G iyo iQOO Neo3 y Z1, taleefannada ku jira Snapdragon 865 gudaha.
Nidaamka qaboojinta ee aan ka hadlayno ayaa lagu horumarin doonaa moobiilladan, sida la filayo, si loo siiyo Snapdragon 865 Plus taageero dherer wanaagsan, in kasta oo aanu dhab ahaan ugu baahnayn inuu ciyaaro si ka wanaagsan, laakiin si looga ilaaliyo kulayl badan saacado badan dalbashada isticmaalka. Waa suurtagal inaan helno, labada xaaladoodba, isugeyn. Kama fileynayno inay u qalabeeyaan taageere sida kiiska Red Magic 5G, sidaas darteed waxaan suuragal ku heli doonnaa muuqaalkan moodooyinka kale.
Waxay u badan tahay, ugu yaraan mid ka mid ah taleefannadan casriga ah ayaa la imaan doona nooca 16GB iyo 256GB ee RAM iyo meel lagu keydiyo. Tiknoolajiyada RAM-ka ayaa noqon doonta LPDDR5, halka midka ROM-ka uu noqon lahaa UFS 3.1, si loo kordhiyo waxqabadka oo ay weheliso Chipset-ka. Isku darkaani wuxuu xaqiijin doonaa tirooyinka ka sarreeya 600 kun oo dhibic oo hadda ay diiwaangashan tahay taleefanka gacanta ee ugu awoodda badan adduunka. Darajada AnTuTu, taas oo maanta ah Oppo Raadi X2 Pro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Snapdragon 865 Plus ayaa lagu dhawaaqay iyadoo la hagaajinayo waxqabadka calanka soo socda
Android 11 ayaa u oggolaan doonta xannibaadda marin u helka shabakadda marka laga reebo barnaamijka loogu talagalay amniga weyn
Golf Galaxy wuxuu kuu kaxeeyaa ciyaaro ka dhan ah ciyaartoy kale si aad u aragto cidda kubada heleysa marka hore